तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ माघ २५ गते आइतबारदेखि फाल्गुन ०१ गते शनिबारसम्म ] - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › राशीफल › साप्ताहिक
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ माघ २५ गते आइतबारदेखि फाल्गुन ०१ गते शनिबारसम्म ]
| ६:३५:०५ मा प्रकाशित
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- मंगलबार साझसम्मको समय मध्यम रहेकोले लामो धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला बाटोमा दुःख हुनसक्छ । सामाजिक कामको सिलसिलामा व्यस्त हुने समय रहेको भए पनि प्रतिफल शुन्य जस्तै हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्नसक्छ ख्याल गर्नुहोला । मंगलबार साझबाट समय उत्तम रहेकोले राज्य बाट पाउने सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेपनि लाभ थोरै मात्र हुनेछ । पैत्रिक स्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिुनहोला । अध्ययनमा समय दिन नसक्दा अरु भन्दा पछी परिनेछ । तापनि आफन्त तथा मन परेको मानिससँग रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचना सहितको समर्थन पाइने छ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले साझेदारी व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । पर्यटन सम्वन्धी व्यवसायमा सामान्य चहलपल हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन वित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । मायाप्रेम तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धको गाठो कसिलो भएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडी पारिनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना निकै बलियो रहेको छ । साथिभाई तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सोमबारबाट बिहीबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले परिवार तथा आफन्त जनसँग मनमुटाव बढ्नेछ । पतिपत्नी तथा मायाप्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । सवारीसाधन तथा यात्रा गर्दा विषेश ध्यान दिनुहोला दुर्घटना तथा अप्रिय घटना घट्न सक्छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउँन निकैनै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विस्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले मायाप्रेममा नजिकिने समय रहेकोछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । व्यापारमा प्रशस्त आम्दानी हुनाले दैनिकि सहज मार्गमा अगाडी बढ्नेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई परास्त गर्दै अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकिनेछ । बिद्यामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउने तथा अन्य क्रियाकलापमा पनि सहभागी भई प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउन सकिनेछ । खेलकुद तथा यस्तै पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिन सकिने छ । बुधबार र बिहीबारको समय मध्यम रहेकोले समस्याका खाडलहरु पुर्न अथक प्रयास गर्दा गर्दै विफल हुनुपर्दा तनाव बढ्नेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ भने दैनिकी प्रभावित हुनेछ । बिषेश गरी चेलि माईतीसँग कुनै कारोबार गर्दा ख्याल गर्नुहोला मनमुटावको स्थिती सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- साताको सुरु र अन्तको समय मध्ययम रहेकोले दाम्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै दैनिकी सुखद तथा सम्बृद्ध बनाउन सकिनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने लामो दुरिको व्यवसायिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । पढाई लेखाईमा थोरै समय दिएपनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिने छ । स्वास्थ्य सबल रहने हुँदा शरिरमा एक किसिमको जोस जागर आउनेछ । मायाप्रेममा नजिकिने समय रहेको छ भने विलाशी तथा भौतिक वस्तु प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । सोमबारबाट बिहीबारसम्मको समय राम्रो रहेकोले वादविवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईको जित निश्चित हुनेछ । मुद्दा मामिलामा तथा न्यायलयबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ ठाउमा लगानी गर्ने अवसर आउनेछ । मायाप्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् मजभुत भएर जानेछ । कुरा काट्नेहरु प्रशंसा गर्दै हिड्नेछन् । पुरानो रोग निको भएर जाने तथा पुराना समस्या हल भएर जानेछ । खोजमुलक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । मावली पक्षबाट तपाईको काममा आर्थिक सहयोग हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- मंगलबार साझसम्मको समय मध्ययम रहेकोले अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यहरुको पनि सहयोग तथा समर्थन नहुँदा एक्लोपनको महशुष हुनेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला पेट सम्वन्धी समस्या आउन सक्छ । भौतिक साधन तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा बिचार पुर्याउनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । मंगलबार साझबाट आफन्त तथा मावली पक्षको सहयोग पाइने हुनाले कामहरु गर्न शरिरमा उर्जा पैदा हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई हराउदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ । व्यापारमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ भने थोरै लगानी बाट यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने भएको हुनाले न्याय पाएको अनुभुती हुनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- साताको सुरु अन्तको समय राम्रो रहेकोले अदालती तथा न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । दाजुभाई तथा आफन्तको सहयोगमा व्यापारमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । मायाप्रेमको डोरो कसिएर जानेछ भने जीवन साथीको सम्बन्ध थप प्रगाड भएर जानेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्राको सम्भावना भएपनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । पढाईलेखाईमा सुधार गर्न सकिने तथा नतिजा हात पार्न सकिने छ । सोमबारबाट बिहीबारसम्मको समय मध्यम रहेकोले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला, पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको कारोबार गर्दा वा प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्यम रहेको छ । मायाप्रेममा नचाहादा नचाहादै एक अर्काबिच छुट्टिनु पर्दा मनमा खल्लोपन महशुष हुनेछ । सन्तान तथा छोराछोरिसँग पनि मनमुटाव सिर्जना हुने योग रहेकोछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले वादविवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने मुद्दा मामिला तथा न्यालयबाट हुने न्याय सम्पादन तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । दाजुभाई तथा छिमेकिसँगको सम्बन्ध सुदृड भएर जानेछ । बिद्या बिद्यार्थीहरुले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । मायाप्रेम तथा पतिपत्निबिच विश्वासको वातावरणमा थप प्रगाडता आउनेछ । जीवन शैलिमा सुधार हुनुको साथै समयको महत्व बुझ्दा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ । बुधबार र बिहीबारको समय मध्ययम अस्वभाविक खर्च बड्ने हुँदा मन चिन्तीत रहनेछ । आमा वा परिवारका सदस्यशित टाडिनु पर्दा गाह्रो महशुष हुनेछ । पढाईलेखाई बिभिन्न कारणले अश्त व्यस्त रहने तथा तत्काल सुधार गर्न नसकिने हुँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । सर्वसाधारण सहयोग नगर्ने हुँदा राजनीति तथा समाजसेवामा पनि आजको दिन लाग्ने समय छैन । स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या आउने योग रहेको छ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- समाजमा बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै थेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । व्यापारमा वढोत्तरिको योग रहेको छ भने नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सकिनेछ । कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने आफन्तको सहयोगले कामहरु समयमा नै सकाउन सकिने छ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मायाप्रेममा रमाउन चाहनेहरुलाई समयले साथ दिनेछ भने जीवन साथीसँग थप आत्मियता बढ्नेछ । साताको अन्त अर्थात शुक्रबार र शनिबारको समय मध्यम रहेकोले समय अनुकूल नहुनाले आमा तथा परिवारका सदस्यहरु तपाईदेखि टाडिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । बिद्यार्थीहरुले पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा भनेजस्तो नतिजा हात लगाउन गाह्रो पर्नेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा अलि बढी गम्भिरता अपनाउनु होला आलोचना गर्नेहरु सक्रिय रहनेछन् ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ):- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले कामहरु स्वत स्फुर्त रुपमा अगाडी बढ्नेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा नयाँ प्रकृतिको व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । मायाप्रेमको डोरो कसिलो हुनुको साथै घर परिवारमा बिग्रेको सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजनमा साथ रमाईलो गरी समय कटाउन सकिने छ । बुधबार र बिहीबारको समय मध्यम रहेकोले बचन पूरा गर्न नसक्दा आफन्त तथा ईष्टमित्रहरु तपाईदेखि टाडिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ । बोल्दा ध्यान नदिए गलत निर्णयहरु हुनेछन् भने पछि पस्चाताप हुनेछ । पढाइ लेखाइमा ध्यान नदिए अरुभन्दा पछि परिनेछ । अरुका लागी समय र श्रम खर्च हुने हुँदा आफ्नो काम थाति रहनेछन् ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानी खेर जाने छैन भने पद पाउने योगलाई नकार्न सकिदैन । सामाजिक कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने हुदा मन प्रशन्न हुनेछ । प्रेममा सफलता तथा सामिप्यता बड्नेछ । बिद्यामा गरीएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । सोमबार र मंगलबारको समय मध्यम रहेकोले अस्वभाविक खर्च बड्ने हुँदा मन चिन्तीत रहनेछ । शारिरिक कष्ट तथा आँखामा समस्या देखिन सक्छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा रहेकोछ सजक रहनुहोला । व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै नै सघर्ष गर्नुपर्ला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):-साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । बिशेष गरी हाईड्रोपावर,पानी तथा औषधीसँग सम्बन्धीत व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । बिद्यामा सोचे अनुरुप नै प्रगती हुनेछ । परिवार तथा आफन्तहरु तपाईको कामदेखि प्रशन्न हुनेछन् । सवारीसाधन प्राप्त हुने योग रहेको छ । दाजुभाई बाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ । मायाप्रेममा विश्वासको वातावरण झन कसिलो भएर जानेछ । सामाजिक क्षेत्रमा नाम,दाम तथा प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ । बुधबार र बिहीबारको समय मध्यम रहेकोले आफन्त तथा परिवार कै सदस्यहरुबाट सहयोग नपाइने हुदा कामहरु थाती रहनेछ । व्यापारमा लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउनुहोला । मायाप्रेममा अरुकै नकारात्मक टिका टिप्पणीले मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ भने पतिपत्नीबीच अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला समान्य स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या आउनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- सांगितिक माहोलमा दिन बित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । नीति निर्माण तहमा तपाईको सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाईलेखाईमा भनजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ । साताको अन्त अर्थात शुक्रबार र शनिबारको समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा गडबड आई दैनिक कामकाज बिग्रने खतरा रहेकोछ सचेत रहनुहोला । व्यापारमा लगानी गर्न केहि समय पर्खनु राम्रो रहेकोछ । प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले तथा नचाहादा नचाहादै टाडिनु पर्दा मनमा नरमाईलो लाग्नेछ । तपाईको सातादिन शुभ रहोस
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ४ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ५ दिन पहिले
महाशिवरात्रि पर्व मनाउन पशुपति क्षेत्रमा ११ समिति सक्रिय २१ घण्टा पहिले
भारतमा एकैदिनमा थप १८ हजार नयाँ संक्रमित, १०८ को मृत्यु १३ घण्टा पहिले
फर्निचर उद्योगमा आगलागी, ४५ लाखबराबरको क्षति २१ घण्टा पहिले
एकै साथ पाँच दर्जन बढी निलगाई फेला ३ दिन पहिले
ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन ४८ खोप केन्द्र तोकिए १९ घण्टा पहिले
बहुविवाहका अभियुक्तलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना ५ दिन पहिले
३८ लाख हिंसा पीडित नागरिकलाई मानवीय सहायता प्रदान ३ दिन पहिले
पेट्रोलियको मूल्यवृद्धिप्रति राप्रपा युवक संगठनले जनायाे विरोध ४ दिन पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकले दियो २७० बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक ३ दिन पहिले
सरकार र विप्लव नेकपाबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता ! ३ दिन पहिले
राजधानीका सडकमा प्रचण्ड–माधवको कब्जा ४ हप्ता पहिले
भागरथीको हत्यामा संलग्न आरोपितको डिएनए परीक्षण गरिँदै ६ दिन पहिले
भारतको हिमपहिरोमा परेर १८ जनाको मृत्यु, २०० बेपत्ता ४ हप्ता पहिले
दुर्लभ केसीको ‘ज्यानमारा मुस्कान’ सार्वजनिक ३ हप्ता पहिले
पर्यटन गन्तव्यस्थलमा बर्दियाबाट चार स्थल छनोट ३ हप्ता पहिले
दशैँको मुखमा मासु पसल अनुगमन, कुहिएको चार किलो मासु नष्ट १ वर्ष पहिले
सरकारले मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालयको विभाग जस्तो बनायो ! २ वर्ष पहिले
जापानमा शक्तिशाली हावासहितको आँधी, ५० जना घाइते १ वर्ष पहिले
स्याङ्जाको भालुपहाडमा बुलेट बाईकसहित बेपत्ता पंकज भेटिए, दुर्घटना कि हत्या ? ७ महिना पहिले